Ndị a na-atụ anya na ndị mmadụ na-agwọ ọrịa
Onye enyi nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa ọ bụla na-ekesa ume bụ ụkwara. Na mbido, ụkwara na-eji ọkpụkpụ na mbufụt nke akpụkpọ anụ mucous, na n'ọgwụgwụ nke a kpụrụ akpụ. N'ihi ya, a na-ekewa ya na akọrọ na mmiri. Ihe mgbaru ọsọ nke ịgwọ ụkwara akọrọ bụ iji belata na ịkwụsị ihe mgbaàmà, ma mgbe sputum gosipụtara ihe bụ isi na-ewepụ ya na akụkụ iku ume, ebe ndị dọkịta na-akwado iji ọgwụ abụọ na ọgwụ ndị na-atụ anya.
Ngwá ọgwụ ndị na-atụ anya ya maka ụmụaka
Ndị ọgwụ ndị a na-enye site na ụlọ ọrụ ọgwụ na-emepụta oge a nwere ọtụtụ nsogbu: ọrịa ara, afọ ọsịsa, ọgbụgbọ, vomiting, wdg. Ya mere, ọtụtụ ndị nne na-ahọrọ ụmụ ha ndị na-atụ anya ụkwara maka ụkwara. Na mbụ, ọ bụla ịhọrọ usoro ọgwụgwọ maka nwatakịrị kwesịrị ka ekwurịta ya na dọkịta ga-enyere aka ịhọrọ nhọrọ kacha mma. Enwere otutu ihe oriri na mkpuru ahihia, nke n'eji dochie ọgwụ ogwu nke ogwu okpo. N'ihe gbasara ịrịa ụmụaka, ihe ndị edere aha na ndị na-achọ ọdịmma ndị mmadụ na-ejikarị:
mgbọrọgwụ nke licorice;
Ndị na-atụ anya na-achọsi ike na ime afọ
N'oge ime ime, ọ ka mma ịhapụ ọgwụgwọ ọgwụ ọjọọ, ebe ọ bụ na enwere mmetụta ọjọọ nke kemịkal ahụ n'ahụ nwa ahụ. Ụmụ nwanyị nọ n'ọnọdụ a anaghị enwe ọrịa ọrịa iku ume, mana, ịjụ ịṅụ ọgwụ, iji ọgwụ ndị na-atụ anya na-eme ihe n'oge ime nwa dị nnọọ nlezianya. Ụfọdụ n'ime ndị na-atụ anya ihe ọkụkụ nwere ike ime ka ndị na-emepụta akpa nwa, nke nwere ike iduga na arụmọrụ na-adịghị mma. Ọgwụ mmụta ọdịnala na-ewere dị ize ndụ ndị na-atụ anya ya dị ka:
decoction nke oregano;
a decoction nke na-atọ ụtọ scallop;
nsị na mmanụ dị mkpa.
Ngwọta kachasị nchebe maka ụkwara akọrọ n'oge ọzụzụ na n'oge ime ime bụ soda, nke m na-eji site na inhalation, rinsing ma ọ bụ ingestion.
Na bronchitis na ụmụ, ọtụtụ ndị na-atụ anya na-agwọ ọrịa na-akwadebe site na nri. Nke a dị mfe, n'ihi na ọ bụghị ụmụaka nile na-eji nwayọ na-eme ihe mgbe ha na-ekpo ọkụ ma jiri obi ha dum na-anabata herbal decoctions. Dịka ọmụmaatụ, ụdị ọgwụgwọ dị otú ahụ na-atụ anya ya bụ ihe eji mma Brazil. Iji kwadebe broth Brazil, ị ga-ewe 2 unere, 1 tablespoon shuga na otu iko mmiri. Ihe niile a na-emepụta na-eme ka ọ bụrụ ihe na-esi ísì ụtọ, na-ekpo ọkụ ka ọ bụrụ mmiri, na-aṅụkwa mmiri ọkụ.
Ọgwụgwọ ụkwara ụkwara
Iji mesoo ọbụna ụkwara akwara siri ike dị irè, ọ dị gị mkpa ịghọta ihe kpatara ụkwara. O nwere ike ịbụ bronchitis, ọrịa ara, ọrịa nje, ọrịa oyi na ọtụtụ ọrịa ndị ọzọ. Ọtụtụ mgbe, ihe kpatara ụkwara ụkwara bụ mmepụta nke enweghị atụ na nkwụsị na-elekwasị anya na bronchi ma ọ bụ trochia. Ọ kacha mma iji ọgwụgwọ ndị mmadụ maka ọgwụgwọ ụkwara ụkwara. Dịka ọmụmaatụ, mmiri ara ehi dị ọkụ, 0,5 liter nke na-agbakwunye 2 tbsp. spoons mmanụ aṅụ na 100 ml nke ịnweta mmiri. Ọ na-akwalite ịmepụta imi, nke dị mkpa na ụkwara ụkwara. N'ezie, ụzọ ndị mmadụ si emeso ụkwara akọrọ abụghị nanị nke a. Ị nwere ike iji ihe ọṅụṅụ nke radish, mmanụ aṅụ na lemon, mmebi na akwukwo eucalyptus, soda.
Iji mee ka ụkwara akọrọ dị ala, nnukwu mmiri mmiri na-enyere aka, n'ihi ya, a ghaghị iji ọgwụ na-eme ka ụkwara akọrọ na mkpịsị ahịhịa dị iche iche dị na ya. Maka nke a, ị ga-ahụ oregano, wolf St. John, Mint, chamomile, nne na nne na nna na rosemary, nke a na-amịkọrọ na mmiri akọrọ na mmiri esi mmiri ma sie ike ruo awa 24. .
Kedu ka esi ewere mmiri ara ehi snoo?
Oliv mmanụ maka ihu - atụmatụ nke ngwa na 3 super-ndenye ọgwụ
Buzina - bara uru njirimara na contraindications
Mmiri Lemọn - gịnị bụ ojiji na otu esi eji ya na cosmetology na ọgwụ ndị mmadụ?
Ọgwụgwọ nke pancreas na herbs
Inhalation na okpomọkụ
Kedu ihe bụ ọgwụgwọ maka beare bi?
Nri nke akwukwo nri
Velvet Amur - Njirimara ọgwụ
Lavender mmanụ - Njirimara na ngwa
Osisi Sesame - uru bara uru
Osisi maka igbochi
Kedu ka ụzụ si eto?
Mbemiso cell cell
Pies na sọrel nke yist mgwakota agwa
Kedu mgbe tulips oge ntoju na Holland?
Adriana Lima jidere na Gala 2017 na ndị enyi ya bụ Julian Edelman
Nri na mbufụt nke gallbladder
Foto maka oge ịse foto oge oyi
Izu isii nke afọ ime - nwa ebu n'afọ
Ezigbo ihe oriri tomato maka oyi
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ - mee ihe ejiji
Kedu otu esi esi zụlite ike?
Oge iri na ise, weghaara foto
Elongation nke cervix
Kedu ka esi eme ka gị na onye ị hụrụ n'anya mezie?
Ọrịa na-adịghị ike ígwè - mgbaàmà na ọgwụgwọ
N'ime ime ụlọ nke ederede
Strawberry na-eto eto n'èzí
Kedu ka esi amata ima?
Ụbọchị megide ụkwara nta